National Gallery of Zimbabwe haisi National Art Gallery
Kana ukasiya vara rinoti i pavara rinoti itsvo, unenge watauta uchiti tsvo iro risingazorevi zvinoreva itsvo. Zvichidaro hazvoka izvi zvinoreva kuti wakanganisa. Zvino zvimwe chete nezvandinosangana nazvo mukushanda navanhu vanoita zvemitamba netsika uye uvaranomwe. Nguva zhinji apo vanenge vachishambadzira mitambo yavo inenge ichizoitotika paNational Gallery of Zimbabwe unoona vachiti mutambo unenge uchiitikira paNational Art Gallery. Zvino ndangoti tizivisane kuti National Gallery haisi National Art Gallery.